Ilhaan Cumar oo sheegtay in Trump & taagerayaasha Xisbiga Jamhuuriyiinta Minnesota ay si xun u faafiyeen xanuunka safmareenka ah ee Covid 19, | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Ilhaan Cumar oo sheegtay in Trump & taagerayaasha Xisbiga Jamhuuriyiinta Minnesota...
Ilhaan Cumar oo sheegtay in Trump & taagerayaasha Xisbiga Jamhuuriyiinta Minnesota ay si xun u faafiyeen xanuunka safmareenka ah ee Covid 19,
Ilhaan Cumar oo ah gabar Soomaali ah, kana tirsan golaha aqalka Congress-ka Mareynka, islamarkaana ay si weyn isku hayaan madaxweynah dalkaasi ayaa eedeyn halis ah u jeedisay Donald Trump xilli loola cararay isbitaal milatari ka gadaal markii isaga iyo xaaskiisa laga helay cudurka faafa ee Coronavirus.
Ilhaan ayaa sheegtay in Trump & Jamhuuriyiinta Minnesota ay si firfircoon u faafinayaan xanuunka safmareenka ah ee Covid 19, sida ay hadalka u dhigtay.
Sidoo kale waxa ay intaasi ku dartay inuu halis ku yahay caafimaadka bulshada iyada soo dooratay iyo guud ahaan dalka, xilli madaxweynaha laga helay feyraska Corona.
Waxaa kale oo ay carabka ku dhufatay in Trump uu horseeday boqolaal xaaladdood oo kor u kaca kiisaska Covid-19 ah.
“Markii uu sidaas samaynayay, wuxuu horseeday boqolaal xaaladdood ah oo kor u kaca kiisaska Covdi19 ah. Madaxweynaha Mareykanka iyo Jamhuuriyiinta Minnesota waxay si firfircoon u faafinayaan fayras dilaa ah. Waxay khatar ku yihiin caafimaadka bulshada isoo dooratay iyo dalkeenna.” ayay tiri Ilhaan oo dagaal siyaasadeed kula jirta Trump.
Ugu dambeyn waxa ay hoosta ka xariiqday in maamulka madaxweyne Trump uu masuul ka yahay geerida in ka badan 200,000 oo u dhimatay cudurka Coronavirus.
Hadalkan ayaa ku soo aadaya, iyada oo haatan lala tacaalayo xaaladda madaxweynaha dalka Mareykanka oo uu soo ritay cudurka Covid-19, waxaana la dhigay isbitalka Walter Reed National Military Medical Center oo ku yaalla magaalada Bethesda ee gobolka Maryland ee ku dhow Washington, halkaasi oo uu dhowr maalmood ku sugnaan doono.
Previous articleCiidamada amniga ee Galmudug oo gaaray deegaano hoostaga magaalada Hobyo
Next articleMadaxweyne Farmaajo oo gaaray Dalka Koonfurta Sudaan